အဖော်စောင်ထားစို့…..(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဖော်စောင်ထားစို့…..(၂)
Posted by cobra on Sep 2, 2011 in Copy/Paste, Creative Writing | 20 comments
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့ ကိုဘယ်ယောက်ျားမှကြာရှည်တောင့်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသလို
ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့ ကိုလည်းဘယ်မိန်ကလေးမှတောင့်မခံနိုင်ပါဘူး။
ယောက်ျားလေးဆိုတာကြီးကြီးငယ်ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ ရင်အပျော်အပါးဘက်ကိုရောက်ကြတာများပါတယ်။
အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကိုယ့်ယောက်ျားကိုမယုံရင်ကွန်ဒုံးမှာEXP date ပါတယ်မှတ်ထားပေါ့ ဒါမှသူလဲယူလာလို့မရမှာ။
ဒါ့ကြောင့်ကွန်ဒုံးကိုဟန်းဖုန်းရဲ့ အိတ်အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရေမစိုတော့ဘူးပေါ့….။ :D
အမလေး အမလေး ယောက်ျားတွေများ သူတို့လုပ်တာကျတော့ အချင်းချင်းအားပေးနေလိုက်ကြတာ ။
sex ကိစ္စအတွက် အရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်ဆိုရင် တရားဝင်ကာမပိုင်မိန်းမတစ်ယောက်ယူ
ကြပါလား။ ယောက်ျားတွေမို့လို့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဟိုလိုလုပ်လို့ရတယ်အသံကောင်းမဟစ်ကြပါနဲ့။ ဘယ်ယောက်ျားမဆို စိတ်ထားမြင့်မြင့်ထားပြီး ကိုယ့်နှမ သူ့နှမ လိုစာနာသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောကြေးဆို
ကိုယ့်အဖေ ကတစ်ခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေရင်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီတိုင်းပဲ ကြည့်နေ
မှာလား ။ကိုယ့်အမေကိုမသနားကြတော့ဘူးလား …. ….
ူLone ကသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လို့စာနာမိအောင် ဥပမာ ပေးတာပါ။ တကယ်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ cobra ကိုဆိုလိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမသားများဘက်မှဝင်ရောက်ခံစားတတ်စေရန်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ အဲဒါကို ရိုင်းသွားတယ်လို့
ထင်ရင်တော့sorry ပါပဲ။မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေကြောင့် အမျိုးထဲမှာ သေဖူးလားမသေဖူးလား တော့ အမျိုးတွေထဲ စစ်တမ်းမကောက်ကြည့်ဖူးပါဘူး။ အမျိုးတွေနဲ့အချစ်ဆုံးအခင်ဆုံးတွေမှာ ဒီလိုရှိလာရင်တောင်မှ cobra ကိုပြောသလို ပြောမိမယ်
ထင်တာပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ cobra တို့လိုယောက်ျားတွေ အများဆုံးသုံးသင့်တဲ့ လက်
သုံးစကားတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့ရင် မိန်းကလေးတွေကိုလည်း စော်ကားမိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ထပ်ပြောမယ်
Lone ကလည်း မိန်းမမြတ်မိခင်တွေဘက်က၀င်ရောက်ခံစားတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး comment ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာ cobra ဒီလောက်ဆိုနားလည်မလား…
cobra သူငယ်ချင်းတွေကို သွေးစစ်ကြည့်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဖတ်ကြည့်ရလောက် အခြေအနေမကောင်းဘူး။ HIV ကစောစောသိရင်ဆေးနဲ့ ထိန်းလို့ရတယ်၊ နောက်ကျရင်တော့ သွားဘီ။
ယောင်္ကျားများဟာ တယ် အတ္တကြီးပါလား..၊ ဒီပို့စ်ရေးတဲ့ စာရေးသူ လဲ အတ္တကြီးတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါ
တယ်.၊ ငါတို့ အတွက် ငါတို့ဖို့ ဒါ ပဲ အမြဲတွေးနေကြတာပဲ..၊ မိန်းကလေးတွေ ဘက်ကို လဲ နဲနဲတော့ စဉ်း
စားပေးနိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်..၊ ရှင်တို့က ကွန်ဒုံးဆောင်ပီး ပြည့်တန်ဆာမလေးတွေနဲ့ပျော်ပါးမယ်ပေါ့နော်
ထားပါတော့..၊ မိန်းကလေးတွေအတွက် အခွင့်အရေး ဆိုတာရော စဉ်းစားမိကြပါရဲ့လား..၊
သားသားက ၀ယ်ဖို.တောင်ရှက်တယ်ဗျ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လုပ်ပါအုံး
If u live in Myanmar, it’sabit difficult to buy it if u feel shy.
So, my suggestion is find the pharmacy which hasamale receptionist. You can also buy it and other stuffs from some beetle shops (kun yar), but I don’t recommend it because of the various quality. Moreover, there are many movable shops around Sule, Theingyi Zayy, Pannsodan (Especially at nights).
If u live abroad, u can buy it from big supermarkets, which has the self-service Point of Sales Terminal. Or go into the clinic’s toilet, grab some for free if they are there (in UK).
3 Teens Accused Of Stealing Condoms From Walmart
Suspects Charged With Shoplifting
POSTED: 10:57 am EDT August 18, 2011
Read more: http://www.wxii12.com/news/28903998/detail.html#ixzz1WoWUVQB0
WILKESBORO, N.C. — Three teenagers were arrested on Wednesday evening after Wilkesboro police said they were caught trying to steal condoms from Walmart.
Police said an officer was called about 8:15 p.m. after the three were shouting atanearby gas station.
The officer found the three inside the Walmart, according toapolice report. They were identified as Michael North, 18, of North Wilkesboro; Jerrard Norris, 17, of Mooresville; and Pamela Spicer, 18, of Moravian Falls.
Police said the three consented toasearch and the officer found several packs of condoms in Norris’ pants. More condoms were then found on the other two, police said.
All three were charged with shoplifting. Spicer and Norris were additionally charged with damage to property.
Police said Norris was also charged with trespassing after it was learned he had previously been banned from Walmart property.
ရေးနေတာကို တယောက်ယောက်က ထောက်လာပြီဆိုရင် .. နည်းနည်းတော့သတိထားပါ။ အပြုသဘောနဲ့စဉ်းစားပါနော..။
ငါရေးတဲ့လမ်းကြောင်းကို ရည်ရွယ်ချက်ကို (အနည်းဆုံး)တယောက်ကတော့.. ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမယူပဲရှိတယ်…ဆိုတဲ့သဘောပေါ့..
ဆိုတော့.. ပြင်ရေးပေါ့..။ သတင်းတွေထဲလည်း လိုက်ရှာပြီး ဘာသာပြန်သင့်ပြန်..ကူးသင့်ကူး..အချက်အလက်တွေနဲ့ တင်ပါ..။
အမှန်က..မိမိရဲ့ (ကိုယ်အမြင်)ထည့်ရေးရင်.. ပရောဖက်ရှင်နယ်(ဆရာဝန်) တွေရေးတာက.. စာဖတ်သူတွေ..ပိုအကျိုးများများရနိုင်ပါတယ်..။
အခု..ကိုရင်လုပ်တာနဲ့.. ကျုပ်တောင် အင်တာနက်ထဲ လိုက်နှိုက်တာ.. စိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးတွေ့တယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ…. ပညာသားပါပါနဲ့.. ပညာပေးသဘောရောက်အောင် ဆက်ရေးပါ.. သတင်းတွေမှီငြမ်းပါ..။
အောက်မှာ ..ရှာထားတာလေးတွေ..မှီငြမ်းနိုင်အောင်.. ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာနဲ့ သူတို့တွေးတာနဲ့ ကတခြားစီဖြစ်နေပြီလေ။
cobra ပြောချင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ HIV ပညာရေးကျန်းမာရေး တွေလည်းဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် cobra လိုယောက်ျားတွေဘက်က
တက်ကြွစွာနဲ့ ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ။ အမှားတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့သည် ရှိသော်ထိုအမှားအတွက်
ကာကွယ် ပြင်ဆင်နိုင်ရန်ရေးထားခြင်းမျိုးပါပဲ။cobra ကတော့ ဒီအမှားတွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုထားသလို ပုံရေးထားလို့ ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ cobra ကကိုယ့်ကိုယ်ကို
ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်လို့ ထင်နေတာမှားတာပဲ ။ lone ရဲ့ ဆိုလိုခြင်းမှာ မွေးမိခင်၊ဖခင်တွေကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ။ မွေးမိခင်တွေဘက်က စာနာနားလည်
ပေးကြည့်စေချင်တာပါ။ cobra ရဲ့မိဘတွေကို Lone လုံးဝမစော်ကားပါ။ Lone ရဲ့ ဆိုလိုခြင်းကိုလည်း cobra နားမလည် သွားမိတာကိုလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ …..
Cobra ရေ နဲနဲတော့စိတ်ရှည်ထားပေးပါ… ပို့စ်ရေးပီ ဆိုကတည်းက ..အပြုရော အပျက်ရော လာတော့
မှာ မဟုတ်လား… ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး.. အလှည့်ကျရင် ကျနော့်ကိုလဲ သတိပေးနိုင်ပါတယ်..
နောက်ဆုံး ပို့စ်ကိုဖတ်ပီးတော့မှ ပဲ ကျနောလဲ ဇတ်ရည်လည်တော့တာပါ..။
((((ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့ ကိုလည်းဘယ်မိန်ကလေးမှတောင့်မခံနိုင်ပါဘူး။)))) တဲ့လား … ဟင်းဟင်း တခြားမိန်းမတွေ စိတ်တော့ ဘယ်လိုလဲ မသိပေမဲ့ … etone များ အဲ့ဒီလို သရမ်းတဲ့အကောင်နဲ့ တွေ့ကြည့်ပါလား … အိမ်အပြန်လက်ဆောင်ပါ တခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်လို့ … လူရှေ့ တပတ်လောက် မျက်နှာမပြရဲဘူး ဖြစ်သွားဦးမယ် .. ပါးဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း တောင့်မခံနိုင်ဘူး မှတ်